I-Studio anno 1659 - Isikhungo Sedolobha - Isiteshi Esiphakathi - I-Airbnb
I-Studio anno 1659 - Isikhungo Sedolobha - Isiteshi Esiphakathi
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Rob
Itholakala endlini eyiqiniso yase-Dutch canal, ifulethi lethu le-studio elisezingeni eliphezulu uma ubuka i-"Koepelkerk" yase-Amsterdam liyindawo ekahle yokubalekela abantu ababili enkabeni yedolobha elidala lase-Amsterdam. Njengoba utholakala kalula nje uhambo lwemizuzu emihlanu ukusuka e-Amsterdam Central Station futhi ngaphakathi kwebanga lokuhamba lezindawo ezidumile ezifana neDam square, indlu yase-Anne Frank kanye nesifunda saseJordaan esinempilo, uzokwazi ukujabulela i-Amsterdam njengoba sizenza nsuku zonke. Sithemba ukukwamukela edolobheni lethu maduze!
Uzoba nefulethi lakho le-studio elinendlu yokugezela eneshawa nendawo encane ene-cooker yamanzi, umshini wekhofi, i-toaster, i-egg cooker kanye nefriji encane. Zonke izinsiza (ikhofi, itiye, insipho ne-shampoo) zifakiwe, uma ushoda ngokuthile ungangabazi ukukufonela!
Asinawo umbono wangempela womsele, kodwa isitaladi sethu besiwumsele futhi umbono wethu muhle kakhulu futhi asinabo omakhelwane abangenabo :)
4.86 · 204 okushiwo abanye
Sitholakala enkabeni yedolobha, uhambo lwemizuzu emi-5 kuphela ukusuka esiteshini esimaphakathi. Uma ubhukha uzothola incazelo enemininingwane yomzila ngemilayezo ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuthi ungene.
Siyatholakala kuwo wonke amathiphu nemibuzo, uma udinga okuthile ungangabazi ukusishayela!
Inombolo yepholisi: 0363 8241 B4C1 1400 419B